सप्तरीका संक्रमतिको धरानमा मृत्यु
टाउको दुखाइ कोभिडको लक्षणसमेत हुन सक्छ
बुधबार, ३१ भदौ, २०७७ 0प्रतिक्रिया
विराटनगर, ३१ भदौ । सप्तरीको खडक नगरपालिका–३ घर भएका कोरोना भाइरस संक्रमित ३५ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा बुधबार बिहान मृत्यु भएको छ ।
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजले थप उपचारका लागि धरान पठाएको थियो । मृतक पुरुषमा भदौ २८ गते संक्रमण देखिएको थियो ।
उपचारका क्रममा बुधबार बिहान ६ः१० बजे संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले बताए । उनका अनुसार राजविराजबाट ल्याएपछि मंगलबार बिहान १०ः४६ बजे मृतक पुरुषलाई प्रतिष्ठानको कोडिभ अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार थालिएको थियो ।
मृतकमा मृगौला सम्बन्धी र उच्च रक्तचापको समस्या रहेको जानकारी उनले दिए । मृगौलामा समस्या भएका उनको सातामा दुई पटक डाइलासिस हुँदै आएको थियो । मृतकको शव नियम अनुसार व्यवस्थापन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको डा. सापकोटाले बताए ।